မောင်မောင်စိုး – တောင်ပြာတန်း၏ အခြားတဖက်မျက်နှာ – အပိုင်း ၂ – MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်မောင်စိုး – တောင်ပြာတန်း၏ အခြားတဖက်မျက်နှာ – အပိုင်း ၂
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ခွန်ကြာနုနှင့် စိုင်းလှအောင်တို့ဦးစီးသည့်အဖွဲ့က ” လွတ်ကျောက်ဆောက် ” ခေါ် SSIA ရှမ်းပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အမည်ဖြင့်၎င်း ကျိုင်းတုံအရှေ့ပိုင်းတွင်း ကျောက်ငါးခမ်းဦးစီး၍ ” စဝ်ဟန်စစ်တိုင်း ” SNA ရှမ်းအမျိုးသားတပ်မတော်အဖြစ်၎င်း၊ ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းတွင် စဝ်နွဲ့ဦးစီး၍ နွမ်စစ်ဟန်အနေဖြင့်၎င်း လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ တဖန် နွမ်စစ်ဟန်အဖွဲ့မှ မိုးဟိန်းဦးစီးသည့် SNUF ရှမ်းပြည်လုံးဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးကောင်စီဟူ၍ ခွဲထွက်ခဲ့ပြန်သည်။ ဤကား ၁၉၆၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က အခြေအနေဖြစ်သည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် စဝ်ဟန်စစ်တိုင်းမှနေ၍ အိုက်မြင့်ခေါ် စဝ်ခွင်းမင်စိုင်းနော်ပန်းတို့မှ ” တပ်စင်စစ်တ်ိုင်း ” အမည်ဖြင့် ထပ်မံခွဲထွက်သည်။ ထို့နောက်ပိုင်းတွင် စဝ်ခွင်းမင်တို့သည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပူးပေါင်းသွားခဲ့ပြီး CPB အရှေ့မြောက်စစ်ဒေသ တပ်မဟာ ၇၆၈ အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီး ဝနယ်နှင့် မိုင်းလားဒေသကြားရှိ ဆီလူးဒေသ၌ စိုးမိုးလှု ပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၈၉ CPB ပြို ကွဲသွားသောအခါ NDAA မိုင်းလားအဖွဲနှင့် ပူးပေါင်းသွားခဲ့ကြတော့သည်။
← ကာတွန်း ATH – လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းခွင့်
နီဇူလိုင် ● ရေမဆေးကျောက်ကလေးများ →
ဆလိုင်းသွှအောင် – သွေးရောင်သန်းသော လလေးလုံး
2 thoughts on “မောင်မောင်စိုး – တောင်ပြာတန်း၏ အခြားတဖက်မျက်နှာ – အပိုင်း ၂”
ဖဆပလ(တည်မြဲ) ခေါင်းဆောင်တွေကို အာဏာသိမ်းတဲ့ အချိန်မှာ မဖမ်းသေးပါ။ အာဏာသိမ်းတဲ့ အချိန်မှာ အဖမ်းခံရ သူတွေဟာ ဖဆပလ(သန့်ရှင်း)တဖြစ်လဲ ပြည်ထောင်စု (ပထစ) ပါတီခါင်းဆောင်တွေပါ။ နောက်တနှစ်ခွဲကျော်ကျော်ကြပြီး ၁၉၆၃ခု နိုဝင်ဘာလမှာ ကျားကြီးဗဆွေရဲ့ “နောက်သို့” ဆိုတဲ့ မိန့်ခွန်းဟောကြားပြီး ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာမှ ဖဆပလ (တည်မြဲ) ခေါင်းဆောင်တွေကို “ထိန်းသိမ်း”တာပါ။
ဦးဗဆွေက “ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းဟာ ပါးစပ်ကရှေ့သို့လို့ အာပေါက်အောင် အော်နေပေမဲ့၊ လက်တွေ့လုပ်နေတာက နောက် သို့တွေချည်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်၊ လူမျိုး၊ဘာသာ သာသနာနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ရှေ့ရေး ကောင်းကြိုး စတာတွေကို တကယ်တွေးရင်၊ တကယ်စေတနာရှိရင် ရာထူးကအမြန်ဆုံးနှုတ်ထွက်ပါ၊ တော်လှန်ရေးကောင်စီကို ဖျက်သိမ်းပြီး ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပါ”လို့ပြောလိုက်လို့ပါ။
ဘာရမလဲ၊ အာဏာရူးကြီးက ဖဆပလ(တည်မြဲ) ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းတဲ့အပြင် မြန်မာတပြည်လုံးမှာ မဆလ ကလွဲပြီး ကျန်ပါတီအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းလိုက်ပြီး တပါတီအာဏာရှင်စံနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်တော့တာပေါ့။
Dr. Zhivaka(Kambawza) says:
Crazy mind can destroy not onlyacountry but also the whole world. Shanland is crying because of Burman dorminancy and dictatorship holding autocrats’ brutal regime. Buddha taught us in Abhidhamma that they are “Annta Barla” fools- Blind and Brainless,shameless, mercyless crazy guys who can never attain Enlightment and go to hell in next life to follow their leaders now in Ah We Si.